16.03 Vonona ve ?
Ny sakafom-panahintsika anio Zoma 16 Marsa 2018 dia ny Apokalipsy 1.1-8, no teny izay hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' io teny io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy ? na ny Fanahy Masina sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
1 Ny Fanambaran’ i Jeso Kristy, izay nomen’ Andriamanitra Azy, mba hasehony amin’ ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana; ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’ i Jaona mpanompony,
2 Izay nanambara ny tenin’ Andriamanitra sy ny filazana an’ i Jeso Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany.
3 Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’ itý faminaniana itý ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro.
4 Jaona mamangy ny fiangonana fito any Asia : Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ ny Fanahy fito izay eo anoloan’ ny seza fiandrianany;
5 ary avy amin’ i Jeso Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ ny maty ary Lehiben’ ny mpanjaka amin’ ny tany. Ho an’ izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin’ ny fahotantsika tamin’ ny ràny,
6 sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’ Andriamanitra Rainy,- ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena.
7 Indro Izy avy amin’ ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ ny tany. Eny, Amena.
8 Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha.
VONONA VE ?
Sambatra izay mihaino sy mitandrina (1-3)
Ny fiantombohan’ny boky eto no mamaritra fa ny fanambarana dia fanambaran’i Jeso Kristy (1).
I Jaona no voafidin’ny Tompo hitondra izany faminaniana lehibe izany, hafatra natao indrindra hovakiana eo anivon’ny fiangonana.
Voalaza fa “sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’itý faminaniana itý ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny” (3a).
Raha hovakiana sy henoina fotsiny tokoa moa ny Teny kanefa tsy hiainana, dia zava-poana ihany.
Izany fiainana ny Tenin’Andriamanitra izany dia tokony atao amin’ny famakiana ny Baiboly iray manontolo.
Ny boky izay nosoratan’i Jaona eto dia natao ho an’ireo fiangonana fito tany Asia, izay Torkia (Turquie) ankehitriny.
Tanàna lehibe fito no misy ireo fiangonana ireo.
Izany hoe amin’ny alalan’ireo fiangonana fito lehibe ireo dia ho mora no hiparitahan’ny fanambarana nampitondraina an’i Jaona ho amin’ny fiangonana nanerana izao tontolo izao, ary anisan’izany isika ankehitriny.
Ny tso-dranon’ny fahasoavana sy fiadanana notononina teto dia zava-dehibe tokoa satria izany dia avy amin’Ilay akehitriny sy tahoha ary ho avy; avy amin’ny Fanahy fito; ary indrindra avy amin’i Jeso Kristy (4).
Midika fanantenana sy fampaherezana lehibe tokoa izany.
Tsy maintsy ho tonga (7-8).
Ny fanambarana eto dia mampanantena ny hiverenan’i Jeso Kristy indray.
Ho andro lehibe tokoa izany andro izany satria ny olona rehetra hahita Azy.
Indrisy fa hiavaka ny olona amin’izany fotoana izany.
Hisy ny hitomany.
Mbola fotoana anefa izao hiomanantsika hiatrehana izany, raha tsy mbola tonga eny amin’ny rahon’ny lanitra Izy.
Voakasik’izao Fanambarana izao ve aho ?
Hamaranantsika itý Mana androany itý dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny ankizy, sy ny andolan-tsento ary ny tanora isika.